Sandesh Prabhahकेटा मान्छे ले कपाल छोटो पार्दैमा ज्ञानी र फटाहा हुन्छ र ? भ्रम र यथार्थ Sandesh Prabhah
केटा मान्छे ले कपाल छोटो पार्दैमा ज्ञानी र फटाहा हुन्छ र ? भ्रम र यथार्थ
हाम्रो समाज मा लामो कपाल पाल्ने केटा हरु लाई फटाहा , ट्यापे को उपनाम दिदै उनीहरु माथि हेर्ने नजर फरक हुन्छ। तर के कपाल सानो काट्दै मा उसको भित्रि बानी , उसले गर्ने काम हरु परिवर्तन हुन्छन र ?येस्ता प्रश्न हरु मुख्य तय स्कूल र कलेज पदने विद्यार्थी हरु को प्रश्न सधै मन मा हुन्छ। तर साचै के कपाल पाल्दैमा उसको पढाइमा र उसको व्यक्तित्व मा असर पर्छ बारे म भ्रम र यथार्थ मेटाउदै छु।
१) मानिसहरु लाई लिंग र लामो कपाल बीच छिटो छुट्याउन को लागी महत्वपूर्ण छ कि कसैलाई शुरुमा वा केहि कोण बाट भ्रमित गर्न सक्छ।
२) ऐतिहासिक रूपमा, पुरुषहरूलाई बढी काम गर्न र उनीहरूको कम देखिने बारेमा चिन्ता गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ किनकि यो समय खपत हुने र उनीहरूको उत्पादकत्वलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। महिलाहरूलाई यसको सुन्दरता बढाउन अधिक समय लिन प्रोत्साहित गरिएको छ।
)) पुरुषको कपाल झर्छ र महिला भन्दा धेरै पातलो हुन्छ। यो टेस्टोस्टेरोनको DHT मा रूपान्तरणको कारणले हुन सक्छ। मसँग एक पटक मेरो २० को सुन्दर कपाल थियो र एक निश्चित लम्बाइमा यसको पातलो हुनु र घस्रने क्रममा यो ब्रश गर्दा सुरु भयो। मैले तुरुन्तै टक्कै जाने डरले यसलाई छोट्यायो र यो झर्ने वा पातलो भएको छैन।
महिलाहरु लाई जेनेटिकली पुरुषहरु भन्दा राम्रो कपालको जीन हुन सक्छ। आनुवंशिक वंशका कारण, महिलाले हजारौं बर्षदेखि आफ्ना कपालहरूको ठूलो हेरचाह गरिसकेका छन्। हामी मानिसहरुसँग छैन, र त्यसैले यो हाम्रो जीनको एक धेरै मा यो राम्रो तरीकाले विकसित गर्न नहुन सक्छ। एक एशियाई मानिससँग म जस्तै ककेशियान भन्दा राम्रो कपाल हुन सक्छ, र मलाई आश्चर्य छ कि यदि यो उनीहरूसँग सम्बन्धित छ जुन हामीसँग समयको दौडान भन्दा यसलाई कायम राख्न कडा परिश्रम गर्दै सम्बन्धित छ।
महिला ऐतिहासिक रूपमा एक अर्कासँग उनीहरूको उपस्थितिको बारेमा धेरै प्रतिस्पर्धी हुन्छन् जबकि पुरुषहरू शक्ति र स्थितिका लागि प्रत्येकसँग बढी प्रतिस्पर्धी भएका छन्। पुरुष पनि एक महिला को एक जोडी को खोजी गर्दा अन्य गुणहरूको तुलनामा एक पुरुष को परवाह भन्दा बढी को उपस्थिति को बारे मा परवाह गर्न मानिन्छ।
धेरै चिसो क्षेत्रहरूमा, दाह्रीहरू धेरै सामान्य हुन्छन् जहाँ पुरुषहरू घरका बाहिर हिडमा वा हिउँमा माछा मार्दै आएका थिए। तातो क्षेत्रहरूमा मानिसहरू सूर्यको खेती गर्ने र सामानहरू बोक्ने ठाउँमा घर बाहिर थिए होलान् र यसलाई शान्त रहनको लागि छोटो बनाउन चाहेका थिए। महिलाहरू छायाँ मा घर भित्र भएको हुन सक्छ र त्यसैले आफ्नो कपाल आफ्नो शरीरको आन्तरिक तापमान को रूप मा ठूलो असर गरेको हुन सक्छ।
क्रिश अर्याल , जिक्षासु
पोष्ट अवलोकन : 139